အလုံအလောက်? နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုအမှာ မတ်လသံမဏိစျေးကွက်ခန့်မှန်းချက်!
post အချိန်: Mar-01-2021
တစ်ပတ်ခန့်မြင့်တက်ပြီးနောက်အဓိကသံမဏိစက်ရုံများ၏အရင်းအမြစ်များကိုသိုလှောင်ရုံတစ်ခုအဖြစ်သိုထားပြီးသိုလှောင်ထားသော်လည်းမြစ်အောက်ပိုင်းသည်စျေးကွက်ထဲသို့မ ၀ င်ရသေးသောကြောင့်အရှိန်ပြင်းနေသောစျေးကွက်ကလည်းဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းသွားပြီးသံမဏိဈေးနှုန်းသည်အောက်သို့ကျဆင်းနေသည်။ ။ ဖေဖော်ဝါရီရောင်းအားကုန်ဆုံးပါပြီ ဒါဆိုဘယ်လို ...ပိုပြီးဖတ်ပါ »
Jianlong Group ၏ပထမဆုံးအသိဥာဏ်ရှိသောသံမဏိဘားထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းစီမံကိန်းသည်ဆိုက်ရောက်တော့မည်ဖြစ်သည်
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် China Railway 9th Bureau Group Co. , Ltd. (China Railway9Bureau) နှင့် Jianke Machinery (Tianjin) Co. , Ltd. (Jianke Machinery (Tianjin)) လီမိတက်တို့သည်သုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Liaoning ပြည်နယ်၊ Shenyang တွင်ဆွေးနွေးပွဲ။ သုံးပွင့်ဆိုင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု A ...ပိုပြီးဖတ်ပါ »
မနေ့ကဖိအားများဆက်ဖြစ်နေစဉ် Lun Nickel သည်တစ်နေ့တာကုန်သွယ်မှုတွင်ဒေါ်လာ ၅၀၀ ကျော်ကျဆင်းခဲ့သည်
Lun နီကယ်မနေ့ကဆင်းပြေး။ Lun Nickel ကိုတစ်တန်ကန်ဒေါ်လာ ၁၉၅၀၀ ဖြင့်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးလျှင်မြန်စွာတက်ခဲ့သည်။ တစ်နေ့တာအတွင်းအမြင့်ဆုံးအချက်သည် ၁၉၉၀၀ ထိရောက်ရှိခဲ့ပြီးအကြီးဆုံးမြင့်တက်မှုသည်ဒေါ်လာ ၃၈၀ အထိမြင့်တက်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူကအားနည်းဆက်ပြောသည်။ အနိမ့်ဆုံးနေ့ရက်ကာလသည်အမှတ် ၁၈၉၈၅ ထိရောက်ရှိခဲ့ပြီးတစ်ရက်အတွင်းကျဆုံးနှုန်းသည် ၅၃၅ ဖြစ်သည်။ပိုပြီးဖတ်ပါ »
ဒီဂျစ်တယ်စွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်း! Songyang ရှိသံမဏိပိုက်ကုမ္ပဏီ၏လွတ်လပ်သောသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုသည်အလွန်အစွမ်းထက်သည်။
Songyang ၏ထိပ်တန်းသံမဏိပိုက်ကုမ္ပဏီများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည့် Shangshang Desheng Group Co. , Ltd. သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် Songyang တွင်အခြေချပြီးကတည်းကစမတ်စက်ရုံတည်ဆောက်ရန်ကတိပြုခဲ့သည်။ ယနေ့အချိန်တွင်ကုမ္ပဏီသည်ကုန်ကြမ်း၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အရည်အသွေးကဏ္ aspects အားလုံးတွင်အသိဉာဏ်ကိုသိရှိခဲ့သည်။ စစ်ဆေးခြင်း ...ပိုပြီးဖတ်ပါ »
နွေ ဦး ရာသီအားလပ်ရက်ရှည်လျားပြီးတဲ့နောက်စျေးကွက်ဖွင့်လှစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာမြင့်မားတဲ့ခရိုမီယမ်စျေးနှုန်းမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ ယခုအချိန်အထိမြင့်မားသောခရိုမီယမ်ထုတ်လုပ်သူများ၏အဓိကဖော်ပြချက်သည်အားလပ်ရက်အပြီးတွင်ယွမ် ၃၀၀ / ၅၀ တန်အထိတိုးမြှင့်ခဲ့ပြီး ၈၈၀၀-၉၀၀၀ ယွမ် / ၅၀ တန်အထိရောက်ရှိခဲ့ပြီးလျင်မြန်စွာရောက်ရှိခဲ့သည်။ပိုပြီးဖတ်ပါ »
ယခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှ စတင်၍ သံသတ္တုရိုင်းဈေးနှုန်းများသည်အရှိန်အဟုန်ဖြင့်တိုးတက်မှုနှုန်းကိုရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့တွင်အဓိကသံရိုင်းအနာဂတ်စာချုပ်၏ပိတ်ပွဲသည် ၁၁၄၄.၅ ယွမ် / တစ်တန်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်သံရိုင်းများအနာဂတ်တွင်စံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့သည်။ ထိုနေ့တွင်ပင်တရုတ်သံရိုင်းဈေးအညွှန်းကိန်း (CIOPI) ...ပိုပြီးဖတ်ပါ »
သရဖူအဆုတ်အအေးမိရောဂါကူးစက်မှုအသစ်ကြောင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသံမဏိ၊ မြစ်အောက်ပိုင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသောကုမ္ပဏီများသည်ထုတ်လုပ်မှုကိုအကြိမ်ကြိမ်ဖြတ်တောက်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ အစတွင်ထုတ်လုပ်မှုကိုရပ်တန့်ခဲ့သည်။ ၀ ယ်လိုအားကျဆင်းလာခြင်း၊ ထောက်ပံ့ရေးကိုပိတ်ဆို့ထားခြင်း၊ ..ပိုပြီးဖတ်ပါ »
ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက် - သံမဏိစျေးနှုန်းသည်ယွမ် ၁၇၀ / တစ်တန်ကန်ဒေါ်လာ ၉၅၀ အထိမြင့်တက်ခဲ့သည်
ယနေ့သံမဏိအနာဂတ်မှာအပြောင်းအလဲမြန်သည်။ ၂၁၀၃ ကန်ထရိုက်စာချုပ်အရယွမ် ၁၇၀ အထိရှိပြီးယွမ်တစ်တန်လျှင် ၁၃,၉၁၀ အထိရှိခဲ့ပြီးသံမဏိအနာဂတ် ၂၁၀၃ ကန်ထရိုက်အပေးအယူမှာ ၁၃၉၂၀ ယွမ်နှုန်းဖြစ်သည်။ ယနေ့ Wuxi အစက်အပြောက်ဈေးကွက်တွင် ၃၀၄ / ၂ ခ ​​၂.၀ ခြေလေးချပ်စီဖြင့်အနိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းမှာတစ်တန်လျှင်ယွမ် ၁၄၈၇၀ ဖြစ်သည်။ပိုပြီးဖတ်ပါ »
TISCO သည်ပြောင်းလဲမှုအသစ် Baowu သံမဏိကိုပိုင်ဆိုင်သည်
၂၀၂၁ တွင်စတင်ခဲ့ပြီး Taigang ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီးနောက် Baowu ၏အမှန်တကယ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုတစ်ခုလည်းစတင်ခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက်နေ့တွင် TISCO သည်စက်မှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်းပြီးဆုံးခဲ့ပြီးအစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်ကို China Baowu သို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ အမှတ်အသားပြုသည် ...ပိုပြီးဖတ်ပါ »
သံမဏိပိုက်အများစုသည်စက်ရုံမှထွက်သောအခါ၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ များတွင်တွေ့ရသည့်ထုတ်ကုန်အများစုနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ မျက်နှာပြင်သည်ငွေဖြူရောင်သတ္တုတောက်ပမှုကိုပြသပေးပြီးအလွန်ပြားချပ်ချောချောမွေ့သည်။ ၎င်းသည်လူတိုင်းမကြာခဏခေါ်လေ့ရှိသောတောက်ပသောမျက်နှာပြင်ပိုက်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ထိုအချက်များအဘို့ ...ပိုပြီးဖတ်ပါ »
တရုတ်အမျိုးသား Baowu ဥက္ကChairman္ဌနှင့်အဖွဲ့သည် Baosteel Desheng 1780 ၏အပူအရှိန်မြှင့်စမ်းသပ်မှုအခမ်းအနားသို့တက်ရောက်ခဲ့သည်
post အချိန်: ဒီဇင်ဘာ -14-2020
ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက်နံနက်ပိုင်းတွင်“ တရုတ်နိုင်ငံတွင်နှစ်ပေါင်း ၁၃၀ Baowu နှစ်ပေါင်း ၁၃၀” အားရည်စူးပြီးလူသိများထင်ရှားသောပညာရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ဖူကျန့်ပြည်နယ်ရှိ Baosteel Desheng 1780 သံမဏိသံမဏိသံမဏိပရောဂျက်၏အပူပေးဝန်ဆောင်မှုများအတွက်အခမ်းအနားကျင်းပခဲ့သည် Baosteel မှာကျင်းပ ...ပိုပြီးဖတ်ပါ »
HBIS တန် ၆၀၀၀၀ တံတားသံမဏိသည် Pingtan Strait Bridge ကိုထောက်ပံ့သည်
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်နိုင်ငံ၏ပထမဆုံးပင်လယ်ဖြတ်ကူး - ရထားလမ်းနှစ်မျိုးသုံးတံတားနှင့်ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံးဖြတ်သန်းလမ်း - ရထားလမ်း - နှစ်မျိုးသုံးတံတား - ပင်းတန်ရေလက်ကြားနှစ်ဆအသုံးပြုသောလမ်းနှင့်ရထားလမ်းတံတားသည်အသွားအလာစတင်ခဲ့သည်။ တံတားဆောက်လုပ်နေစဉ်အတွင်း HBIS သည်တန်ချိန် ၆၀,၀၀၀ ကျော်သောအမြင့်များသိုလှောင်ထားတယ်။ပိုပြီးဖတ်ပါ »